टेस्लाको कारमा एक महिलाले ‘टेस्ला ब्रेकले नियन्त्रण गुमायो’ भन्दै हंगामा मचाएपछि…! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
टेस्लाको कारमा एक महिलाले ‘टेस्ला ब्रेकले नियन्त्रण गुमायो’ भन्दै हंगामा मचाएपछि…!
अहिले चीनको सांघाईमा अटो शो कार्यक्रम भइरहेको छ ।उक्त शोमा टेस्लाको कारमा एक महिला ग्राहकले हंगामा मचाएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।
शोमा सबै कम्पनीले नयाँ नयाँ मोडल प्रदर्शन गरिरहेका छन् । वास्तवमा, कम्पनीका एक जना दुःखी ग्राहकले अटो शोमा टेस्लाको गाडीमाथि चढेर सबैको ध्यान खिचेकी थिइन् । सोमबार भाइरल भएको भिडियोमा एक महिलाले टि-सर्ट लगाएकी छिन् ।
उनको गाडीमा ब्रेकको समस्या देखेर उनी खिन्न भएकी थिइन् । जसका कारण उनले त्यहाँ हंगामा सिर्जना गर्न थालिन् । ती महिला गाडीको छतमा उक्लिएर बारम्बार ‘टेस्ला ब्रेकले नियन्त्रण गुमायो’ भनि चिच्याएकी थिइन् ।
यद्यपि उक्त भिडियोमा ती महिलालाई शान्त पार्न कडा संघर्ष गरिरहेका कर्मचारी तथा गार्डहरू पनि देखाइएको थियो । रिपोर्टका अनुसार ती महिला टेस्ला मोडल ३ मा यात्रा गर्दै थिइन् ।
त्यसबेला कारको ब्रेक फेल भएको थियो । फलस्वरूप, दुर्घटनामा तिनको परिवारका चार जना सदस्यको मृत्यु भयो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि कम्पनीको अटोपायलट मोडको सुरक्षाबारे नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ । जसको हाल टेक्सास पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कम्पनीले यस वर्ष भारतमा आफ्नो पहिलो कार लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । सोही क्रमलाई अगाडि बढाउने एलन मस्कको कम्पनीले देशका केही उच्च अधिकारीसँग साझेदारी गरेका छन् ।
टेस्ला कम्पनीले भारतीय बजारमा मोडल ३ बाट सुरुवात गर्नेछ जसको मूल्य ६० लाख भारु रहेको छ । नेपाल अटो
प्रकाशित मिति: Apr 23, 2021
देवतालाई जल चढाए कोरोना भाग्ने हल्ला फैलिएपछि…!
सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समयमा धेरै कुरा भाइरल हुने गरेको छ । यस्तै भारतको गुजरातको अहमदाबादस्थित
मालीकी २५ वर्षीया महिलाले जन्माइन् एकैपटक ९ सन्तान !
मालीकी २५ वर्षीया महिलाले एकैपटक ९ बच्चा जन्माएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
थाहापाउनुहोस् : एक केजीको १ लाख भारु मूल्य पर्ने यो तरकारी !
भारतको बिहार राज्यको औरंगाबादका एक जना किसानले एउटा यस्तो तरकारी खेती शुरु गरेका छन् जसको
सन्जय दत्त नसामा हिरोइनको पछि चक्कु लिएर दौडिएपछि…!
अभिनेता सन्जय दत्त बलिउडका चर्चीत अभिनेता मध्ये एक हुन् । बलिउडमा उनी समय समयमा विवादमा
आँखा किन फर्फराउँछ ? शुभ-अशुभको संकेत कसरी थाह पाउने ? जन्नुहोस
कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखा अचानक फर्फराउन थाल्छ । अनि हाम्रो देशमा आँखा फर्फराउनुलाई शुभ अशुभ फलसँग
अर्काकी श्रीमतीलाई खोसेर लैजान यस्तो अनौठो मेला थाहापाउनुहोस् !
विश्वमा धरै प्रकारका भाषा र संस्कृतिका मानिसहरु बस्ने गर्छन् । हरेक जातजातीले आफ्नै भाषा संस्कृतिको